रोग लागोस् , भोक नलागोस् : कोरोना अनुभब - Filmy News Portal Of Nepal
रोगले सबै मरिहल्दैनन् । रोग लाग्नु अपराध पनि त हैन । रोग लागोस् , भोक नलागोस् । रोगले मर्न सहज होला, जती भोकले मर्ने गर्छन् । किन यसो भने होला थाहा छ ?? भोकले मान्छेलाई कस्ता कस्ता कदम चाल्न बलवान बनाएर खडा बनाईदिन्छ । तर रोगले मान्छेलाई हलचल गराउन सक्दैन ।
तेसैले मलाई रोगी बनायो मैले मनोबल उच्च राखे मैले परास्त गर्दैछु दिनानुदिन रोगलाई । म जीवनको महत्व बुझेर नम्र हुँदैछु । तर म भोकले छटपटाएको भए म क्रुर भएर निस्कन्थे होला । तेसैले यही बुझे रोग भन्दा भोक ठुलो हो । रोगलाई जित्न पनि खाएरै बस्न पर्ने रोगबाट मुक्त भएपछिपनी खानालाई नै संघर्ष गर्न पर्ने । रोगका लागि मान्छेले पैसा बचत गरेको बिरलै पाईन्छ । तर खानाकोलागी लुकाएर ढाटेर वा संघर्श गरेर पनि बचत गरेका हुँदा रहेछन् धेरैले ।
दशै नजिकिदैछ । मनमा अनेकौ कुरा लहराई रहेको छ । यो हैन कि यो पटक दशै मनाउन पाईन भन्ने । जीवन रहे दसैं त कती आउछ कती ? सधैको बर्ष झै यसपाली पनि दशै आयो .. तर यता दशै नभएर दशा आयो…
दशैं र दशामा फरक यति हो; दशैं आएको भनेर साझमा चमार जातिले नौ दिन अगाबै ढ्यांग्रो ठोक्थ्यो र लाग्थ्यो दशै सुरु भयो.. तर यता त बाजा नबजाई दशा अर्थात कोरोना आयो …
कोरोना लाग्दा कस्ले भन्यो छुन हुन्न भनेर यता मैले मृत्युलाई छोएर आईसके; कस्ले भन्यो स्वाद हुन्न? गन्ध हुन्न भनेर?
यता जिब्रोको स्वाद भुलेर श्वासले जीवनको स्वाद र मीठो सुगन्ध थाहा पाईसक्यो..
धेरैले बुझेको कुरा रोगलाई मात्र हैन धेरै कुरालाईइ जित्न सकिन्छ मनोबलले । हामी सारिरिक रुपमा मात्र हैन मनोबलले पनि कमजोर भयौ भने रोगले मात्र हैन हामीलाई धेरै कुराले जित्ने रहेछ । तेसैले भनेको होला बल भन्दा बुद्दी अर्थात हाम्रो सोच ठुलो भनेर । कोरोनाले धेरै कुरा सिकायो , धेरै कुरा सोच्न सक्ने क्षमता दियो । नत्र हतारमा सधैं गरिने काम को पछुतो यस्तो फुर्सद भयो कि पछुताउने भन्दा सच्याउने छुट्टी मिलेको महसुस पनि भयो ।